सूचना/प्रविधि « GDP Nepal
( Tuesday, July 14, 2020)
प्रदेशमा ५ मा तारवाला फोन विस्थापित, पूर्ण रुपमा फाइबर टू होम सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर ५ मा पहिलो पटक फाइबरमा आधारित एफटिटिएच सेवाले पुरानो प्रविधिको तारवाला फोन पूर्णरुपमा विस्थापित गरेको छ । कम्पनीले नवलपरासी जिल्लामा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय बर्दघाटको
छाङरुमा टेलिकमको सेवा
काठमाडौं, असार ८ । नेपाल टेलिकमले दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाँउपालिकामा सिडिएमए मोबाइल सेवा सुरु गरेको छ । छाङरुमा केही समय अगाडि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपीलाई लक्षित गरी टेलिकमले
डोनल्ड ट्रम्प भन्छन्ः फेसबुक, ट्विटर र गुगल छाडा शक्ति हुन् !
अमेरिका (एजेन्सी): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फेसबुक, ट्विटर र गुगल लगायतका कम्पनीहरूलाई छाडा शक्तिको संज्ञा दिएएका छन् । उनले बारम्बार सामाजिक सञ्जालहरूले एउटा पक्षको विचारलाई नियन्त्रण गरेको आरोप लगाउँदै आएका
काठमाडौं । शाओमी, ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले आज विश्वव्यापी त्रैमासिक मोबाइल फोन ट्रयाकर आईडीसीको अनुसार आफु सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टमा नेपालको नम्बर एक स्मार्टफोन ब्राण्ड बन्न सफल भएको घोषणा
काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स शुन्य अवस्थामा भए पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरु तथा साथीभाइसँग सम्पर्कमा रहिरहन सक्छन् । ग्राहकले भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा बण्डल गरिएको
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । सहयोग रकममध्ये २ करोड रुपैयाँ कम्पनीका कर्मचारीको तलबबाट
काठमाडौं । लकडाउनका बेला आम उपभोक्ताले समय कटाउन इन्टरनेटको सहारा लिन थालेसँगै सेवा प्रदायकहरुलाई हम्मे परिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै यो बेला इन्टरनेट खपत अस्वाभाविक रुपमा बढेको भन्दै अति
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिन नियोजित रुपमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोप कम्पनीले लगाएको छ । चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले आइतबार राजधानीमा
टेलिकमको फोरजी अब ७७ वटै जिल्लामा, मन्त्री भन्छन्– सेवासँगै गुणस्तरमा ध्यान देऊ
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले देशका सबै जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । मंगलबार हुम्लाको सिमकोटमा सेवा विस्तार गरेसँगै कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार
इन्टरनेटमा ठगी गर्ने आईएसपीहरुलाई अब छाड्दैनौं
इन्टरनेट सेयरिङ १ः१५ सम्म हुने गरेको छ । उपभोक्ताले मैले कति सेयरिङको इन्टरनेट पाएको छु भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरण यस विषयमा गम्भीर भएर ‘सेयरिङ रेसियो’ निक्र्योल गर्न
यातायात व्यवसायी महासंघको सर्कुलर अवज्ञा, काठमाडौंमा तीन कम्पनीले बस चलाउने !
काठमाडौं । यातायात व्यवसायी महासंघको सर्कुलर अवज्ञा गर्दै काठमाडौंमा तीन कम्पनीले बस चलाउने भएका छन्
अन्ततः ट्रम्पले पनि मास्क लगाउनै पर्‍यो !
अमेरिका (एजेन्सी): अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि मास्क लगाएका छन् । कोरोनाभाइरस महामारी सुरु
यथास्थितिमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने व्यवसायीको निर्णयमा तीन मजदुर युनियनको पनि साथ
काठमाडौं । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरी एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको